Dowladda oo sheegtay in dalka uusan khatar ugu jirin cudurka Cagaar-showga – The Voice of Northeastern Kenya
Dowladda oo sheegtay in dalka uusan khatar ugu jirin cudurka Cagaar-showga
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in Kenya aysan waqti xaadirkaan ka jirin halis weyn oo ku aadan faafista cudurka qandhada daran wata ee loo yaqaanno Cagaarshowga, kaasoo hadda faro ba’an ku haya wadamada Angola iyo Congada Dimuqraadiga ah oo uu ku dilay in ka badan 440 qof.
Cleopa Mailu oo ah wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in Kenya ayba hadda sare u qaadday howlaha la xiriira kormeerka iyo ka hor taga cudurkaasi halista ah.
Dr Mailu ayaa ka dhawaajiyay in wacyi galin fara badan iyo kormeer lagu sameynayay xaaladda cudurkaasi ay u hor seedday dalka in aysan xiligaan jirin khatar saameyn leh oo ku aadan inuu cagaar-showga ka dillaaco Kenya.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in wali ay jiraan qorsheyaal dheeraad ah oo ay dowladda Kenya ugu jirto sidii ay u xoojin lahayd ka hor tagidda xanuunkaasi laga necebyahay dunida.
Ma jiro wax kiis hor leh ah oo la xiriira cudurkaas oo laga helay Kenya marka laga soo tago labadii kiis ee ugu dambeysay ee la helay bishii March ee sanadkaan, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka.
Labadaas qof oo labadaba rag ahaayeen ayaa cudurkaas lagu arkay intii u dhaxeysay 12-ki ilaa 18-ki bishaas March, waxaana ay ahaayeen dad ka shaqeyn jiray magaalada Luanda ee waddanka Angola.
Dalka Shiinaha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in waddankiisa uu ka helay 11 qof oo qabta cudurkaa, kuwaasoo dhmmaantoodba ka tagay dalka Angola oo ay howlo kala duwan u joogeen.
← Manchester City oo garoonka Arena nationala ku dubatay Steau Bucuresti
Ciidamada Libya oo ku sii siqaya magaalada Sirte →